‘क्याप्टेन’ अनमोलको लागि भुवनले लिए २ डेट ! « Ramailo छ
‘क्याप्टेन’ अनमोलको लागि भुवनले लिए २ डेट !
प्रकाशित मिति : May 29, 2018
समय : 11:57 am
‘क्याप्टेन’ अनमोल केसी गीत छायाँकनका लागि सोमबार मुस्ताङ पुगेका छन् । फिल्मको छायाँकन औपचारिक रुपमा सुरु गर्दै निर्माता भुवन केसीले ‘क्याप्टेन’ का लागि रिलिज मिति पनि लिएका छन् ।
तर भुवनले क्याप्टेनका लागि एउटा मात्रै रिलिज मिति भने लिएका छैनन् । दिवाकर भट्टराई निर्देशित ‘क्याप्टेन’ का लागि भुवनले दुई वटा प्रदर्शन मिति रोजेका छन् । भुवनका अनुसार अनमोलको ‘क्याप्टेन’ भदौ २९ या असोज ५ गते प्रदर्शनमा आउँनेछ ।
‘यो दुई वटा मितिमा क्याप्टेन आउँछ’, भुवनले मुस्ताङ जानुअघि भने, ‘भदौ २९ र असोज ५ बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नै छैन् ।’ उसो त छायाँकन सुरु नहुँदै ‘क्याप्टेन’को रिलिज मिति भदौ ८ गतेलाई तोकिएको थियो ।
‘क्याप्टेन’ले रोजेको नयाँ मिति भदौ २९ खाली नै छ भने असोज ५ सलिनमान बनियाँको यात्रा र आर्यन अधिकारी तथा सृष्टि श्रेष्ठको ‘बाँध माया’ले रिलिज मिति तय गरेका छन् । हेरौं यो दुई मितिमा कुन कुन फिल्म चल्छन् ?